မူရင်း​ရေးသားသူများအား​တောင်းပန်​စာ — Steemkr
ahtaroo58 in myanmar
ကိုစူးရှ၊ မ​ငွေလမင်း၊ မလက်​ခက်​၊ ​မ​ဆောင်းကြိုးကြာ တို့ ခင်ဗျာ
ကျနော် အတာဦး ကူးယူပြီး steemit တွင် ကိုယ်ကျိုးအတွက်တင်ခဲ့သော posts များအတွက် တောင်းပန်အပ်ပါသည် ။
ခင်​မင်ခဲ့ရသော အပေါင်းအသင်းများဆီက မပြောဘဲကူးယူခဲ့သော post များအတွက် မိတ်ဆွေပျက်ခဲ့ရလို့ ဝမ်းနည်းမိရသလို ထိုသို့ ကူးယူမိသည့်အတွက်လည်းတောင်းပန်အပ်ပါသည် ။
MSC leader အကိုဟင်နရီ နှင့်တကွ admins များအားလည်း ယုံကြည်မှုချိုးဖျက်ခဲ့သလိုဖြစ်ခဲ့ရသည့်အတွက် တောင်းပန်အပ်ပါသည် ။
MSC အဖွဲ့ဝင်များအားလည်း ထိုနည်းတူစွာ တောင်းပန်လျှက်ပါ ။
ကျနော့်ကြောင့်မျက်နှာပျက်ခဲ့ရသည့် အကိုဟင်နရီအားလည်း အားနားမိပါသည် ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံတောင်းပန်ရသည့် ကျနော့်အပြစ်အတွက် ကျနော်ကျေနပ်ပါတယ်ဗျာ ။
ကျွန်​​တော်​ကူးယူခဲ့​သော post link များပါထည့်​​ပေးထားပါတယ်​။ ကျန်​​ခဲ့​သော post များရှိခဲ့ရင်​လဲခွင့်​လွတ်​​ပေးကြပါခင်​ဗျ။ public မဖြစ်​​နေ​သော post များဖြစ်​​နေလို့ပါ။ ဒီ​နေရာက​နေအနူးအညွတ်​​တောင်​ပန်​အပ်​ပါသည်​။ ​နောက်​​နောင်​ဒီလိုအဖြစ်​မျိုးမရှိရ​အောင်​လဲ​စောင့်​ထိန်းသွားပါမယ်​။ post ရဲ့မန့်​များတွင်​လဲ credit ​ပေးထားပါတယ်​ဗျ။
myanmar steemit sad
- Curators $4.20
Thank you @ahtaroo for makingatransfer to me for an upvote of 1.01% on this post! Half of your bid goes to @budgets which funds growth projects for Steem like our top 25 posts on Steem! The other half helps holders of Steem power earn about 60% APR onadelegation to me! For help, will you please visit https://jerrybanfield.com/contact/ because I check my discord server daily? To learn more about Steem, will you please use http://steem.guide/ because this URL forwards to my most recently updated complete Steem tutorial?
zayarch47 · 4년 전
လေးစားပါတယ် အမှားမြင် ဝန်ခံပြီး ပြင်ဖို့ပဲမဟုတ်လား Bro
ahtaroo58 · 4년 전
sawlwin58 · 4년 전
ကိုအတာ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါဗျာ
This post has received gratitude of 0.92 % from @appreciator thanks to: @ahtaroo.
kyawthihaa43 · 4년 전
iamgun46 · 4년 전
thank you, your post
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ahtaroo from the Minnow Support Project. It'sawitness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It'sacompletely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.
julybrave53 · 4년 전
ကိုအတာဆီတောင် လာ upvote မလုပ်ဖြစ်တာကြာပီ
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်စိတ်အားမငယ်ပါနဲ့ ဘရားသား